ပန်ဒိုရာ: August 2007
Posted by pandora at 8:46 PM2comments
Posted by pandora at 8:35 PM3comments
Posted by pandora at 7:25 AM3comments
Posted by pandora at 9:25 PM2comments
လည်ပင်းတွေ ညောင်းနေအောင် မော့မော့ကြည့်နေရတယ်
ထသွား ထလာ ၀တ်သင့်တဲ့
Posted by pandora at 9:50 PM4comments
Posted by pandora at 7:35 PM9comments
အစဆိုမှတော့ အစကပဲ စတာဆို။ အစက စတာ အစမှာပြန်ဆုံးနေရင်တော့ စကို မစရသေးဘူးတဲ့။ နွားနို့ကို ယူတယ်။ - ထောပတ်ချက်တယ် - ထောပတ်ရတယ်။ ဒိန်ခဲလုပ်တယ် - ဒိန်ခဲပဲရတယ်။ နို့ဆီချက်တယ် - နို့ဆီပဲရတယ်။ (ဘာများ မျှော်လင့်နေ သေးလို့လဲ)။ ထောပတ် အရည်ပျော်ချင် ပျော်မယ်။ ငါ့ဒိန်ခဲ တစ်ယောက်ယောက်က ရွှေ့ချင်ရွှေ့မယ်။ ဒိန်ခဲကတော့ နို့ဆီ ဖြစ်မလာဘူး။ သရက်ပင်ကလေး စိုက်တယ် - သရက်သီး စားရမယ်။ ရေမလောင်းဖြစ်ဘူး - ဆောရီး။ သံလွင်ကတော့ စီးနေဆဲ။ ပစွုပ္ပန်ကို အနာဂတ်ထိ ခေါ်မသွားနိုင်ခဲ့။ အတိတ်က ထပ်ချပ်လိုက်လာမှာပဲ။ ဘ၀က လွယ်တယ်။ ဥပါဒါန်က ခက်တယ်။ ယုတ္တိဗေဒ စည်းဝါးကျခဲ့တယ်။
Posted by pandora at 12:19 PM5comments
Posted by pandora at 12:45 AM 34 comments
Posted by pandora at 1:32 PM7comments
Posted by pandora at 9:51 AM 13 comments
(paint brush, by pencil tool)
ဆရာမမေငြိမ်း ကိုမောင်ရင်၊ မိုးညို တို့ကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ ...
ဒီကဗျာ ကိုပါ ဖတ်မိပြီး အရမ်းလွမ်းသွားလို့ ဒီပုံလေး ထွက်ကျလာတယ်။
Posted by pandora at 10:48 PM 12 comments
တနင်္လာနေ့ မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ မုန်းနေသူများအတွက် အစစအရာရာ အဆင်ပြေစေမယ့် ဂါထာတော်ကြီး လက်ဆောင် ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဂွတ္တ မောနန္ဒ မန္ဒေ
မေ မိန္ဒ ယောဘ လဗမ္မိ
မေ မိန္ဒ ဘောစ ဟဂမ္မိ
လေစ မုဗ တုဒေစ ၀ါက တု တုမောယရ
အို.. မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသော တနင်္လာနံနက်
ငါ၏ အလုပ်သည် ချစ်ခြင်းတို့ ငါ့အားတည်စေသတည်း
ငါ၏ အမှုဆောင်သခင် ပွေ့ဖက်ခြင်းတို့ ငါ့အား တည်စေသတည်း
ယနေ့ ဆောင်ကြဉ်းရာ အမှုကိစ္စများ မနက်ဖြန် ပြီးမြောက်ခြင်းဖြင့် ဥာဏ်အလင်း ပွင့်ကြကုန်လော့။
(တင်စားပြီး မြန်မာပြန်ထားလို့ နားမလည်သေးပါက သိုးဆောင်းစကားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း အနက်ဖွင့်နိုင်၏။)
May my job love me.
May my boss hug me.
Let’s move today’s work to tomorrow.
(ဂါထာနှင့် ပြန်လည် တွဲယှဉ် တဖွဖွ ရေရွတ်ကြကုန်။)
Posted by pandora at 11:32 AM 13 comments
Posted by pandora at 7:33 PM 10 comments
ပန်ဒိုရာ ဘလောက်ဗကေးရှင်း ယူနေတဲ့အချိန်က WeSheMe တို့က ၃၈ဖြာ မင်္ဂလာ တရားတော် အကြောင်း ဒီလို ရေးပါတယ်။ သူတို့ကို ကိုတေးအေးရိပ် က တက်ဂ် ထားတာပါ။ ဆရာကြီး ဦးသုခရဲ့ သုခမှတ်စုက ထုတ်နုတ်ထားတဲ့ ၃၈ဖြာ မင်္ဂလာ တရားတို့ကိုတော့ ကိုမျက်လုံး ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ဖတ်မိတော့ ပန်ဒိုရာက ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းဖြင့် ၃၈ဖြာ မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီ ဘယ်လိုနေထိုင်နိုင်မလဲလို့ အတွေးပေါက်မိပါတယ်။ ဒါနဲ့ WeSheMe မှာ ကွန်မန့်လေး သွားချတော့ ပန်ဒိုရာကို ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်ခုခု ရေးဖို့ တက်ဂ်လိုက်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေဟာ နေ့စဉ်လူ့ဘ၀မှာ လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်သုံးဖို့လို့ အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် ရိုးရိုးပဲ နားလည်မိပါတယ်။ အပြင်မှာ လူအချင်းချင်း မျက်ဝါးထင်ထင် ထိစပ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ လူ့လောကကနေ အခုလို virtual world အတုကမ္ဘာမှာ အဆင်းအသံမဲ့ နေထိုင်သွားလာ ကြတဲ့အခါ ဒီတရားတော်တွေကို ဘယ်လို အသုံးချလို့ ရနိုင်မလဲလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ မင်္ဂလာတရားတော်ရဲ့ ၃၈ ဖြာလုံး မဟုတ်သော်လည်း စိတ်ကူးမိသလောက် တိုက်ဆိုင်နိုင်တာတွေကို အခုလို ချရေးလိုက်ရပါတယ်။
ဘလော့ဂ်တွေ ဖတ်တဲ့အခါ ကိုယ်မသိသေးတဲ့ အချက်အလက် တွေ၊ ကိုယ်မစဉ်းစား မိသေးတဲ့ အတွေးခေါ်တွေ၊ ကိုယ်ဂရုမပြု မိသေးတဲ့ မှတ်သားနာယူဖွယ်တွေ တွေ့ရမယ်။ ဒီလို တွေ့သိမှတ် ရခြင်းဟာ ဗာဟုသစ္စဉ္စ = အကြားအမြင်များသော သူ၏ အဖြစ် ဖြစ်ခြင်း ကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီလိုမှတ်သားခြင်းဖြင့် မရှင်းမလင်းတဲ့အခါဖြစ်စေ၊ ပိုမိုအသေးစိတ်သိချင်ရင်ဖြစ်စေ မိမိထက် တတ်သိနားလည်သူထံ ဆီပုံး ကွန်မန့်တွေကနေ နိဝါတ = မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်း၊ ပဏ္ဍိတာနဉ္စ သေ၀နာ = ပညာရှိတို့ကို ဆည်းကပ်ခြင်း ဖြင့်ချဉ်းကပ်မေးမြန်းနိုင်ကြပါတယ်။ ဝေမျှသူများကလည်း မိမိသိတဲ့ ပညာဗဟုသုတကို ပေးလှုတဲ့အတွက် ဒါနဉ္စ = အလှူပေးခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ။
ဘလော့ဂ်တွေ အချင်းချင်းဆိုတာလည်း လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံနေကြတာပါပဲ။ ကိုယ့်သဏ္ဍာန် ကိုယ့်အသံကို မမြင်မကြားရလို့ မမြင်ကွယ်ရာ ရောက်နေတယ်လို့ ပြောချင်တာပြော သဘောမထားဘဲ အသက်ဂုဏ်ဝါကို မူတည်ပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အရိုအသေလည်း မပျက်ဘဲ ချစ်ခင်စွာ ရေးသားပြောဆို ဆက်ဆံကြခြင်းဟာ ဂါရ၀ = ရိုသေထိုက်သူတို့အား ရိုသေခြင်း နဲ့ညီသလို သုဘာသိတစ ယာဝါစာ = ကောင်းစွာဆိုခြင်း ကိုဆောက်တည်နိုင်တာပါပဲ။
အခုတလော အမည်မဖော်သူများက တချို့ဘလော့ဂ်တွေရဲ့ ဆီပုံးတွေထဲမှာ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းသော စကားတွေနဲ့ လာရောက် ဆဲရေးတိုင်းထွာ နေတာတွေ ကြားနေရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ခန္တီ = သည်းခံခြင်း တရားကို နှလုံးသွင်းနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှာပါလေ။ ကိုယ်တိုင် အဆဲမခံရတော့လည်း ကိုယ်လည်း တကယ့်တကယ်ဆို ခံနိုင်ရည် ရှိမရှိ မသိပါဘူး။ စိတ် ထားနိုင်ခဲ့ရင်တော့ တရားတော်အရ ဖြစ်သင့်တာကိုပဲ ပြောပြတာပါ။
လောကဓံတရားတွေဟာ လူတွေအတွက် မရှောင်လွှဲနိုင်ပါဘူး။ ဘလော့ဂ်ထဲလည်း ပြေးမလွတ်ပါဘူး။ အတိမ်အနက်သာ ကွာပါမယ်။ လောကဓံတရား ၈ ပါး ကတော့ လဘော အလဘော ယသော အယသော နိန္ဒံ ပသံသံ ဒုက္ခံ သုခံ (လာဘ်ရခြင်း - လာဘ်မရခြင်း၊ အခြွေအရံပေါများခြင်း- အခြွေအရံနည်းခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်း-ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း- ဒုက္ခဖြစ်ခြင်း) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထဲမှာ ဘလော့ဂ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် - သာမန်အားဖြင့် ဘလော့ဂါတွေဟာ ကိုယ့်စာကို လူတွေ လာဖတ်စေချင်ကြတယ်။ ကိုယ့်ကို ခင်စေချင်ကြတယ်။ ကိုယ့်ကို အဖက်လုပ် ဆီပုံးထဲရေးသွားတာ ကွန်မန့်ရေးထားတာ မြင်ရင် သူသူကိုယ်ကိုယ် ၀မ်းသာ တတ်ကြပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လူလာတာနည်းတဲ့နေ့ဆိုရင် ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာနဲ့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ လူတွေ လာချီးမွမ်းကြတိုင်းလည်း ၀မ်းသာလုံး မဆို့ဘူး။ လာပါ့မလားလို့လည်း မစိုးရိမ်ဘူး။ ချီးမွမ်းခန်းတွေကို မက်မက်မောမော စွဲလန်းမနေဘူး။ ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်သွားရင်လည်း စိတ်တည်ငြိမ် နိုင်မယ်ဆိုရင် နကမ္ပတိ = လောကဓံတရားတို့နှင့်တွေ့သော် တုန်လှုပ်သောစိတ် မရှိခြင်း၊ အသောကံ = လောကဓံ တရားတို့နှင့် တွေ့သော် စိုးရိမ်သောစိတ် မရှိခြင်း၊ ၀ိရဇံ = လောကဓံတရားတို့ တွေ့သော် စိတ်၌ ရမ္မက်မရှိခြင်း၊ ခေမံ = လောကဓံ တရားတို့ တွေ့သော် စိတ်၌ဘေးမရှိခြင်း တို့နဲ့နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ သတိပါပဲ။
ဒီနည်းအားဖြင့် အတုကမ္ဘာ ဘလော့ဂ်ထဲမှာလည်း အတ္တသမာပဏီဓိစ = မိမိကိုယ်ကို ကောင်းစွာ ဆောက်တည်ခြင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို လက်တွေ့ကမ္ဘာကအချိန်နဲ့ အင်တာနက်ကမ္ဘာက အချိန်ကို သင့်တင့်မျှတစွာ ဝေမျှပြီး မင်္ဂလာတရားတွေနဲ့ နေထိုင်နိုင်ရင်တော့ အင်တာနက် ကမ္ဘာဟာ ကိုယ့်အတွက် ပတိရူပ ဒေသ ၀ါသောစ = သင့်တင့်သော အရပ်၌ နေထိုင်ခြင်း ပါပဲ။
အခုပြောတာ နမူနာတွေလောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီး ရှိပါဦးမယ်။ အခု ဒါတွေ စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာလည်း မှားကောင်းမှားနေဦးမယ်။ အားလုံးဖတ်ဖို့ တံခါးဖွင့်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်ဆိုတော့ အခုရေးထားတာတွေကို တစ်ယောက်ယောက်က အမြင်မတော်လို့များ ထောက်ပြသွားခဲ့ရင် ကိုယ်မှားတာပြုပြင်ဖို့ စိတ်ထား နိုင်ရင်တော့ သောဝစဿတာ = သူတော်ကောင်းတို့ ဆုံးမအပ်သော စကားကို နာလွယ်ခြင်း နဲ့ ညီနိုင်ပါသေးတယ်။
(ကိုအန်ဒီက ဆက်ပြီး တက်ဂ်ပေးပါဆိုလို့ ကာလေန ဓမ္မသာကစ္ဆာ = သင့်တင့် လျောက်ပတ်သော အခါ၌ တရားတော်ကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း နဲ့ညီသွားအောင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ ဆရာလေး မမေဓာဝီ နဲ့ အလုပ်များတဲ့ မြို့စားကြီး နေဘုန်းလတ် တို့ကို တက်ဂ် လိုက်ပါတယ်။ ကဲရေးကြပေတော့။)
Posted by pandora at 11:20 PM 14 comments
WeSheMe တို့ တက်ထားတဲ့ ၃၈ဖြာ မင်္ဂလာအကြောင်းနဲ့ တခြား ဘာဘာညာညာလေးတွေ စဉ်းစားနေတုန်းမို့ လောလောဆယ် ဒီကဗျာလေး တင်လိုက်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်ပေးကြရင်ဖြင့် ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။
Farther away from the closest.
ဘာသာပြန် အနက်ဖွင့်ထားတာတွေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
August 9, 2007 8:28 PM
(၁) သစ်ပင်က ပြောတယ်……“ကျွန်တော် ကြီးရင့်လာလေလေ…. မြင့်မားလာလေလေ… ကျွန်တော် အခြေတည်ခဲ့တဲ့….ကျွန်တော် အချစ်ဆုံး….ကျွန်တော်နဲ့အနီးကပ်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြေကြီးနဲ့ပိုပိုပြီးဝေးသွားခဲ့တယ်...” ။
(၂) အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကပြောတယ်……“ ကျွန်တော်ရဲ့ ကျော်ကြားမှုဟာ ပြောမနာဆိုမနာ အရင်းနှီးဆုံး ငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝေးရာကိုတွန်းပို့ခဲ့တယ်…”။
(၃) အလုပ်သိပ်ကြိုးစားတဲ့ ယောက်ျားကို မိန်းမကပြောတယ်….. “ရှင့်အလုပ်မှာအောင်မြင်လေ….. ကျွန်မတို့၂ ယောက်ပိုဝေးသွားလေပဲ…” ။
(၄) Blogger တစ်ယောက်ကို သူ့ ကိုယ်စောင့်နတ်ကပြောတယ်……
“နင် blog မှာသာယာနေလေလေ နင်နဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အပြင်လောကနဲ့ပိုဝေးသွားလေလေဘဲ…”။
(မပန်ရေ….ကဗျာကို ဘာသာပြန်ပါဆိုမှ ဘာတွေရေးမိမှန်းမသိပါဘူး…. ခွင့်လွှတ်တော့ မပန်….)
August 9, 2007 10:56 PM
မြန်မာစကားမှာ " အမြင့်ရောက်လေ၊ လေတိုးလေ" လို့တော့ကြားဖူးတယ်။
ပေထားတဲ့ ကဗျာကိုတော့ ဘာသာမပြန်တတ်ဘူး။ ကြိုးစားကြည့်ဦးမယ်။
August 9, 2007 11:07 PM
လေးမ ပြောထားတာလေး ကြိုက်တယ်.. အထူးသဖြင့် အပြင်လောကနဲ့မဝေးအောင် တို့တတွေ ဘလောဂ့်ကေးရှင်း မကြာခဏ ယူသင့်တယ်း)
တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင် တောင့်တောင့်ကြီး ဖြစ်နေတယ်. ဖတ်လိုက်တာနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပေါက်ပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါလေ. It’s very simple English.
ဒါပေမယ့် အဲဒါကိုပဲ မြန်မာဆန်ဆန်လေး ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုပြောချင်တယ်.
အောင်မြင်ကျော်ကြားလေလေ မိတ်ဆွေစစ်ရဖို့ ခဲယဉ်းလေလေပဲ…
August 10, 2007 11:04 AM
"မြင့်သထက် မြင့်.မြင့်.. လာလိုက်တာများ..
အနားမှာ လေစိမ်းတွေကြီးပဲ ခပ်ရင့်ရင့် တိုက်နေလေရဲ့..။"
ထို့ကြောင့် တက်စလာ မကျော်ကြားလိုပါ :P လေစိမ်းတိုက်ခံရရင် ဖျားတတ်လို့ဗျာ... ဟီး..
August 10, 2007 1:49 PM
ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ရေးချင်တာရေးသွား တာ အဟိ
August 10, 2007 4:00 PM
ဒီနေရာမှာ closet ကို attachment လို့ ယူလိုက်တယ်။
တရားရှုထောင့်က ဆင်ခြင်ကြည့်တာပါ… မပန်ကတော့ သံယောဇဉ်တွေခဏဖြတ်ထွက်သွားတဲ့ ဗကေးရှင်းကနေဘလော့(ဂ)ဥာဏ်စဉ်တွေတက်လာပုံရတယ်…
Posted by pandora at 6:22 PM 10 comments
Posted by pandora at 12:20 AM6comments
ဒါပေမယ့် မလှ ခဲ့ဘူးကွယ်...
ရီ မှောင် မည်း ဆို ကြောက်လို့
Posted by pandora at 4:22 PM9comments
အရှေ့မြို့ရိုးက မိုးရေစက်တွေ မခြောက်ခမ်းသေးပါ..
Posted by pandora at 11:01 PM4comments
Posted by pandora at 11:38 PM9comments
Posted by pandora at 12:43 AM4comments